देउवा र प्रचण्डबीच भएको गोप्य सहमती भयो लिक, माधव नेपालको गयो सातो ! – GALAXY
देउवा र प्रचण्डबीच भएको गोप्य सहमती भयो लिक, माधव नेपालको गयो सातो !
काठमाडौं, १८ कात्तिक । एएमसीसी पास गराउन दुई पार्टीका शीर्ष नेताबीच भएको भित्री सहमती बाहिरिएको छ । मसीसी पास गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिलेर पत्र पठाएको खुलासा भएको हो ।
अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन एमसीसी पारित गर्ने प्रतिवद्धता पत्र पठाइएको खुलासा देउवाले गरेका हुन् । आज स्वदेश फर्किएलगत्तै त्रिभुवन विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग बोल्दै देउवाले भने, प्रचण्डजी र मैंले एमसीसी पास गराउँछौं भनेर पत्र पठाइसकेका छौं ।
एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ल्याटोर्तुसँग देउवाले बेलायतमा भेटघाट गरेका थिए । बेलायतमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा देउवा सहभागी हुँदा ल्याटोतुंसँग एमसीसीबारे नै कुराकानी भएको थियो । त्यहाँबाट फर्किएपछि उनले एमसीसी पास गराउनेबारे नयाँ खुलासा गरेका हुन् ।
ल्याटोर्तुले एमसीसी पास गर्नेबारे कुरा राख्दा आफूले सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर अगाडि बढाउने जवाफ दिएको देउवाले बताए । सत्ता गठबन्धनमा देउवा एमसीसी पारित गराउने पक्षमा खुलेका छन् । तर, माओवादी र नेकपा एसले संशोधनविना एमसीसी पारित गर्न नहुने अडान लिइरहेका छन् ।
देउवाले प्रचण्डसँगै पत्र लेखेर प्रतिवद्धता जनाएको खुलाएपछि राजनीतिकवृत्तमा तरंग आउन थालेको छ । प्रचण्ड एमसीसीको पक्षमा देखिदैनन् । देउवा भने पक्षमा छन् ।
यस्तै एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल देखिएका छन् । सत्ता गठबन्धनका दलमध्ये प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा मात्र पक्षमा खुलेका छन् ।
प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसीसी पास नगर्ने संकेतहरु गरिरहेका छन् । तर, प्रचण्डले एमसीसीको बाहिर बाहिर मात्र विरोध गरेको देखिएको छ । देउवासँग मिलेर उनले एमसीसी पारित गर्नेबारे प्रतिवद्धतासहित पत्र पठाएको खुलासा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आज स्वदेश फर्किएपछि महत्वपूर्ण खुलासा गरेका छन् जसमा देउवा र प्रचण्ड मिलेर एमसीसी पारित गर्ने प्रतिवद्धता पत्र पठाएको उल्लेख गरेका छन् । देउवा एमसीसी पारित हुनेमा ढुक्क छन् ।
एमसीसीलाई अमेरिकी सैन्य रणनीति भन्दै प्रचण्डनिकटस्थहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । तर, प्रचण्ड भने एमसीसीबारे महत्वपूर्ण सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न थालेको देखिएको छ ।
अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी एमसीसी संसदबाट पारित नभई कार्यान्वयन नहुने प्रावधान छ । त्यसैले अमेरिका एमससी पारित गराउन दबाबमा सक्रिय रहेको बुझिएको छ ।